Semalt Kambani uye yayo Services
Iwe une webhusaiti, uye zvirokwazvo iwe unoda kukurudzira webhusaiti yako, uye iwe unoshamisika kuti ndeipi zano rekushandisa kana kuti ndeipi inoshongedzwa zvakanyanya kune webhusaiti yako? Usanetseka; takakurongera zvese.
Chokwadi, chinangwa chemuridzi webhizimisi wepamhepo online ndechekuvandudza mamiriro einzvimbo yake mumapeji ekutsvaga. Nzvimbo yewebsite inoonekwa seyakanaka kana yaiswa papeji yekutanga yekutsvaga mhinduro. Uye izvi hazvigoneke pasina SEO mazano.
Nekudaro, uine izvi mupfungwa, Semalt akagadzira mabasa akanaka kune ese mawebhusaiti ari: SEO (yekutsvagisa injini) uye Web Analytics. Mukuwedzera, Semalt inopa maviri SEO emakwikwi, akadai AutoSEO uye FullSEO.
Asi pamberi pese paruzivo irwo, ngatitaurire iwe nezve chii chinonzi Semalt; Chii uye Nei Semalt anoita. Uye zvimwe zvinhu zvakawanda nezveSemalt. Handeyi!
Yakavambwa munaSeptember 2013, Semalt ikambani yemazuva ano, inokurumidza kukura IT. Dzimbahwe rayo rinowanikwa muKyiv, Ukraine. Seyakazara-yakazara madhijitari agency, tinopa vanamuzvinabhizimusi, webmasters, vaongorori, uye nyanzvi dzekushambadzira nzira itsva dzekushandisa shanduko yewebhu kune chero rudzi rwebhizimusi zvinobudirira.
Semalt inoumbwa nechikwata chevanyanzvi vekugadzira, vane tarenda, vane simba, uye vanokurudzira vanounza mapurojekiti mazhinji akabudirira eIT pakurarama. Tave tichivandudza hunyanzvi hwedu kwemakore gumi iye zvino uye tinokwanisa kusimbisa pasina mubvunzo kuti mumwe nemumwe wedu inyanzvi yechokwadi yekutengeserana kwake.
Yedu yekudyidzana kuedza yakagadzira imwe yepakutanga uye itsva yewebhu webasa. Uye isu tinodada nekuzvizivisa kwauri nhasi. Nekuda kwehunyanzvi uhu uye nerubatsiro rwedu, iwe uchave unoziva kuzadza kwakazara kwewebsite yako.
Mushure memakore mazhinji ebasa uye kuongororwa, tinonzwisisa zvakakwana nezve izvo zvinoda kuitwa, riini, uye sei. Chinangwa chedu ndechokukubatsira iwe kuti usvike kumusoro kwakakwirira, zvose paGoogle uye muhupenyu hwako. Shanda nesu kubudirira kwakasimbiswa.
Sezvauri kuona, isu takavimbika uye tinoda kushanda newe chero nguva yezuva kana husiku!
Iye zvino, sezvaunoziva zvakawanda nezveSemalt , ngatitungamire pane izvo zvinopa semasevhisi.
Chii uye Nei Semalt anoita.
Chii chatingaite? Isu tinotora bhizinesi rako kune chinotevera chinhanho! Isu tinovhura zviteshi zvitsva zvekushambadzira uye tinobatsira iwe kurova makwikwi. Semalt inokupa iwe masevhisi akanakisa akakosha kuti unongedze kutungamira kwewebsite yako, iri: SEO uye Analytics.
Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti SEO tekinoroji ndiyo nzira yehupfumi uye inobudirira yekuwedzera yevateereri uye kutengesa. Naizvozvo, Semalt yakazvipira kuvandudza kuoneka kwenzvimbo yako uye kuisa webhusaiti yako muGoogle's TOP. Vashanyi vazhinji - mari yakawanda! Saka rega Semalt akuperekedze kuburikidza nemasevhisi ayo makuru:
Iyo yekutsvagisa injini yekutsvaga inoshanda sei?
Kunge chero chinhu chinogona kuita kuti iwe uwane mari yakawanda, SEO inogona kuve yakaoma maitiro.
Ehe, iwe unogona kutsvaga mazwi akakosha uye kugadzira SEO-yakagadziriswa META mamaki pachako uchishandisa zvemahara zvishandiso, wozogara kumashure ndokumirira kuti mashiripiti aitike. Nekudaro, izvi hazvisi nzira yakanaka kwazvo SEO mhinduro dzinosvika.
Nzira yakajairika yekuita izvi ndeyekushandisa vashandi vekuita basa rekushandira vega. Nekudaro, iwe haugone kuziva kuti vanogona kuvimbisa iwe zvakakwana basa.
Imwe nzira, uye pamwe iri nani kune vatsva, ndeyekutsvaga mushandi wekuita SEO kune rako bhizinesi. Vanogona kupa mwero wakanaka wekushomekerwa kwemukati nekunze, chimwe chinhu chinofarirwa chaizvo naGoogle.
Kushanda neyakadai kambani, iwe unozotungamirwa kuburikidza nematanho ese eiyo chaiyo SEO:
Keyword (s) Tsvagurudzo: ese mazwi akakosha haazogadzirwa akaenzana. Vamwe havazombonyatso kushandira webhusaiti yako, nepo vamwe vangashanda zvinoshamisa. Ichi ndicho chikonzero nei vachifanira kusarudzwa nehungwaru.
Unyanzvi hwekugadziridza: Iyi tekinoroji yehunyanzvi ndeyakanaka sei nzvimbo yako yakagadzirirwa "kuongororwa" kwekutsvaga injini. Iyo ine zvakananga mhedzisiro yako mikana yekuwana kukoshesa kwavo.
Kugadziridza kwekunze: Kunze kwekunze kana zvivakwa zvemukati zvekushandisa. Zviri zvekutora zvimwe zvinongedzo kuwebhusaiti yako. Zvizhinji zveSEO zvinorevesa kwazviri senge musana we SEO zano, uye vanoita sekunge ndizvo (tichadzoka pane izvo gare gare).
Yekutevera kusimudzira: Ramba uchiedza kuvandudza webhusaiti yako yevashanyi. Kana ivo vachizvida, injini dzekutsvaga dzichaita zvimwechete.
Kubva zvino zvichienda mberi, bhizimusi rega rega repamhepo rinofanirwa kunge richikurudzira avo mawebhusaiti einjini dzekutsvaga zvakanyanya kana zvishoma. Kana, chokwadika, vanonetsekana nezvemari yavo uye kusimba kwavo.
SEO ndeye zvese nekuti inofambisa organic web traffic kuenda kune yako webhusaiti uye "inogadza nheyo" yekusimbisa kuvepo kwako online.
Kushaikwa kwemashoko kunotungamira kudzikiswa kwebhizimusi rako. Gara uine ruzivo uye unodzora bhizinesi rako! Zuva rega rega, isu tinokupa iwe chinangwa chekuongorora data pane yako kufambira mberi.
Mazuva ese, tinoongorora mamiriro enzvimbo iyi nekutarisa mafambiro avo. Chokwadi, Semalt anounganidza ruzivo kune vakwikwidzi vako, hongu chete kana iwe ukafunga kuongorora masaiti avo.
Kusiyana nedzimwe nzvimbo, isu tinogadziridza chinzvimbo chako nguva nenguva, tichikupa mukana wakasarudzika wekutevera nzvimbo dzako saiti online chero nguva yezuva uye uone shanduko dzichangoburwa.
Ongororo dzese dzinounzwa kwauri kuburikidza neakaunzi tsananguro yakasarudzika yakashandurwa kuPDF format iyo iwe yaunokwanisa kutora kubva kune yako saiti. Chirevo chinogona kutumirwa kune e-mail kero yakaratidzwa. Izvi zvinokupa iwe zano rakajeka rekufambira mberi kwako.
Sezvineiwo, kurwira kuti uuye pamusoro peGoogle kwakakosha. Nekudaro, zvakakosha kwazvo kuti uchengetedze chinzvimbo chako kumusoro nekusingaperi, sevanokwikwidza vari kukudzingirira seshumba ine nzara. Kuti udzivise kuwira mumusungo uyu, tamisa webhu analytics yedu.
Hongu, yedu yewebhu analytics inyanzvi yekuongorora sevhisi yevatariri vanovhura musuwo kumikana mitsva yekutarisa musika, kutarisa zvese zvako uye nevanokwikwidza nzvimbo uye bhizinesi analytics data.
Ziva. Kutanga kushandisa yedu yewebhu analytics ikozvino!
Keyword mazano: Tinokubatsira kusarudza sarudzo dzakakodzera kwazvo dzekutengesa.
Nhoroondo dzesarudzo: Tarisa uye uongorore chimiro chemashoko ako akakosha pamusoro penguva.
Keyword chinzvimbo: Mazuva ese ekutarisa ako saiti nzvimbo pane yekutsvaga injini system.
Wokwikwidza Kuongorora: Tsvaga uye ongorora vako makwikwi ekutsvaga injini nzvimbo.
Kudzora kwechigadzirwa chako: Iyi ruzivo rwekuongorora runopa yako yakakurumbira chiyero, ichikubvumira iwe kuvandudza inokwanisa musimboti bato
Webhusaiti Webhusaiti: Kuongorora kwakazara kwewebsite yako kutevedzera kune webhusaiti yekuvandudza uye SEO indasitiri zvido.
Ndeapi SEO macampaign anoita Semalt Anopa?
Sezvatakataurira, Semalt inopa maviri SEO emakwikwi, akadai AutoSEO uye FullSEO. Ngatitaurei nezvavo izvozvi!
Muchokwadi, shasha iyi yakagadzirirwa vanhu vanoda kuwedzera kutengesa kwavo kwepamhepo vasina kujairana neSEO, uye havadi kuisa mari yakawanda pasina kuwana mhinduro. Ipapo AutoSEO mishandirapamwe ndeyakanakisa Campaign kwauri. Tsvaga kuti sei.
Sei uchida AutoSEO?
Mishandirapamwe yeAlsSEO yatove yakazviratidza kune akawanda masosi, saka usaite sarudzo kune yako saiti. Tsvaga mimwe mhedzisiro ye AutoSEO:
Zvese zvakabatanidzwa pamushandirapamwe uyu, AutoSEO inosanganisira:
Kusarudzwa kwemashoko akakosha kwazvo
Kuvaka zvinongedzo kune nzvimbo niche
Zvino, yave nguva yekutanga SEO yekugadzirisa uye kugadzirisa yako Google masero ne AutoSEO.
Keyword kusarudzwa kwe SEO kukurudzira
Kutangwa kwemubatanidzwa wekuvaka dhizaini
Chako maneja tsigiro
SEO kusimudzira mune chero nzvimbo uye mutauro
Sarudza iyo DZIDZISO YAKANYORA YAKO ZVINOGONESA , Semalt ane gore 1, 6 mwedzi, 3 mwedzi, uye kunyangwe 1-mwedzi kunyoreswa , nekuti Semalt anoshandura kune bhajeti rese.
FullSEO , inzira yepamusoro yekubatana ne TOP yeGoogle. Chokwadi, zvinosanganisira kuita kwakasiyana siyana mukati nekunze kwekunakisa saiti yako, ichikupa migumisiro yakanaka munguva pfupi kwazvo.
Kuti usvike pamusoro peGoogle, unoda nguva nezviwanikwa. Nekudaro, isu takagadzira yakakwirira kwazvo SEO marongero ekukubvumira iwe kuwedzera vateereri, kubatanidza traffic, uye kutengesa kwewebsite yako munguva pfupi pfupi inogona kunge iine FullSEO: ITA IZVI IZVO!
Saka, pasina kupokana zvakare, tangisa yako yako FullSEO mushandirapamwe zvino uye uve munzira kuenda ku TOP yeGoogle!
FullSEO mubato wakakwana uye unobudirira wekubatsira kuti bhizinesi rako rikure mune pfupi pfupi nguva inokwanisika yekuwedzera vateereri vewebsite yako ine zvishoma zvishoma chikamu cheSEO:
Na FullSEO, chii chaunowana?
A purofiti inobatsira
Kukurumidza uye inoshanda mhedzisiro yenguva refu
Semalt ane mazana evatengi vakagutsikana
Kubva 2013, zvese zvatinoita zvine chinangwa chekuvandudza mabasa epamhepo evatengi vedu vatengi. Tinodada kwazvo kuva chikamu chebudiriro yavo. Tsvaga apa kugutsikana pane zviso zvevatengi vedu kuburikidza neufakazi hwavo: +32 vhidhiyo ufakazi, +146 zvakanyorwa zvakapupurwa, uye +24 kesi.
Iwe unogonazve kuve mumwe wevatengi vanoguta
Ehe, iwe zvakare unoda kuve mumwe weavo vatengi vakagutsikana, saka zvinogoneka. Semalt yakagadzirira kukuperekedza kubva kunzvimbo yako yazvino kuenda kune yako yepamusoro mune gumi yepamusoro yeGoogle yekutsvaga injini. Izvi ndizvo zvakaitika, semuenzaniso, naMnu Greta, CEO weZaodrasle, uyo akakura zvakanyanya nekwaSemalt's SEO services. Heino zvaakataura nezve chiitiko chake naSemalt: "Basa rakanaka kwazvo! Ini ndaguta, mazwi akakosha ari pamusoro. Ivan Konovalov ndiye maneja mukuru, anoyedza zvakanyanya vamwe vaviri, iye, uye ivo vaive vasina kunaka.
Mumwedzi isingasviki mashanu yeshanduro yeSEO, isu takakwanisa kuchengetedza kufambira mberi uye nekuona kuti Zaodrasle inogona kuwana pekupedzisira muGoogle TOP-5 uye TOP-3. Tinya apa kuti uone zvawanikwa:
Saka kana iwe uchifarira izvi zvabuda, unogona kushanyira saiti yedu uye nekuwana ruzivo rwakawanda nezve vatengi vedu. Mhosva dzinogona kuwanikwa pano.
Izvo zvakakosha zvikuru kuti uzive kuti Semalt ikambani ine ruzivo ine makore anopfuura gumi neshanu eSEO ruzivo uye timu yevanyori vanopfuura zana zana. Saka isu tiri mukudyidzana nguva dzose nevatengi vedu kuti vapindure nekupindura kune chero kuda kunouya kubva kwavari. Nekudaro, pane yedu webhusaiti, unogona kusangana nechikwata chedu chero nguva.
Hapana chipinganidzo chemutauro naSemalt
Iko hakuna chipinganidzo chemutauro, nekuti zvisinei nekuti unotaura mutauro wei, mamaneja edu zvirokwazvo anowana mutauro unozivikanwa newe. Kupfuura zvese, tinotaura Chirungu, French, Italian, Turkish, uye mimwe mitauro yakawanda zvakare.
Chokwadi chinonakidza pamusoro peSemalt kana Turbo nyaya
Muna 2014 takanga tichienda kuhofisi nyowani ndokuiwana muhari yekare maruva. Muridzi wehofisi yapfuura akamusiya akaramba kumutora. Saka isu takasiya turtle kune isu uye takamuti gare gare Turbo. Isu takawana nzira yekudyara uye kutarisira tururu, uye hofisi yedu nyowani yakatamira kune yakakura nzvimbo yakakura aquarium. Kubva ipapo, akave mascot edu.